ओलीको सुझाव- भिम रावल जि‘हतारिएर दिएको राजीनामा फिर्ता लिनुस्’ । - Nepal Times Online
Posted on July 19, 2021 July 19, 2021 Author USER-1	Comment(0)
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावललाई सांसद पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार १० औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले रावललाई राजीनामा दिन नमिल्ने र राजीनामा फिर्ता लिन सुझाव दिएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हतारिएर किन राजीनामा दिएको ? सल्लाह गर्नुपर्ने । ​सकिन्छ भने अझै राजीनामा फिर्ता लिनुस् ।’
उपाध्यक्ष रावलले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वसाको मत हाल्न नहुने भन्दा नेपालले हप्काएर पठाएको ओलीको आरोप छ ।
ओलीले भने , ‘देउवालाई विश्वासको मत नहालौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बना‌औं भन्दा, माधव नेपालले म विधि पद्धति निर्णय मान्दिँन, एक्लै भएपनि भोट हाल्छु भनेर भिम रावलहरुले हप्काएर पठाए ।’
चौध वर्ष ्अघि देवकुमार (दिपेश) भुजेल र विनिता राउतको पिरती बस्दा छुट्नुपर्ने कल्पना कहिल्यै गरेनन् । ओखलढुङ्गाको रावादोलु गाउँको वनपाखामा लुकीछिपी लगाएको पिरतीको डोरी अहिले चटक्क चुँ’डिएको देख्नेहरु जो कोहीको पनि मन अमिलो हुन्छ । अन्तरजातीय जोडीले भागी विवाह गरेरसँगै जीउने म’र्ने वाचा गरेका थिए । ‘एक मुठी सास र एक थोपा र’गत रहेसम्म तिमिलाई […]
सरकारले सैनिक सेवा तेस्रो संसोधन २0७७ नियमावली पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्रालयको प्रस्तावमा संसोधित सैनिक नियमावली पारित गरेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले पुस २९, माघ ५ र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस २७ गते सोमबार […]
बिहान मनकामना माताको दर्शन गर्दै फागुन ०२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल ।
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ )कमाइ राम्रैसँग हुनेछ । अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहन सक्छ । टाढाको यात्राको पनि योग छ । पढाइमा पाउने सफलता यथावत रहनेछ । बुद्धिको तारिफ ठूला व्यक्तिबाट हुनेछ । वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो )स्वास्थ्य विग्रन […]
पुष्पकमल दाहाल पचण्डलाई सागर तमाङ्गको धम्की, मर्न मार्न तयार छौ,अब अत्तिभो (भिडियो )
बिहे गरेको भोलि नै माईतीले केटी लगेपछि केटाले यस्तो सम्म गरे हेर्नुस् (भिडियो)
मानिस हराएको सूचना….
व्यवसायिक प्रहरी सेवा प्रवाहका विषयमा निर्देशन दिनु हुदै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह ज्यु ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की २/३ उपशाखाको अधिवेशन सम्पन्न
Posted on March 20, 2021 March 20, 2021 Author USER-1
युनाईटेड क्लवद्धारा विभिन्न ब्याक्तिहरु सम्मानित